ट्विटर ट्रेन्ड | मेरो कलम
– के तपाई ट्विटर चलाउनुहुन्छ ? विश्वका विशिष्ठ व्यक्तिहरु माईक्रो व्लगिङ साइट ट्विटर प्रयोग गर्छन । ट्विटर सन् २००६ मा ज्याक डोर्षेले स्थापना गरेका हुन् । अडियो भिडियो सम्वन्धी काम गर्ने ओडियो (Odeo) कम्पनीमा लिखित खवर आदानप्रदान गर्ने उदेश्यले डोर्षेले ट्वीटरको परिकल्पना र विकास गरेका थिए । सिमित क्षेत्रको लागी भनेर विकास गरिएको ट्वीटर हाल आएर विश्वमा सर्वाधिक हेरिने साईटमध्ये उत्कृष्ठ दशौ स्थानमा रहेको बेवसाईटको विश्लेषण गर्दै आइरहेको साईट ऐलेक्साले जनाएको छ । एक पटकमा एकसय चालिस अक्षर सम्म ट्वीट गर्न मिल्ने भएकाले यसलाई इन्टरनेटवाट पठाइने एसएमएस पनी भनिन्छ । ट्वीटरमा सामान्यतया प्रत्येक दिन ३ सय ४० मिलियन भन्दा वढी ट्विट हुने गरेको छ । त्यस्तै अनुमानित ५०० मिलियन भन्दा वढी प्रयोगकर्ता रहेका छन् ।
नेपालका नयाँ ट्विटर युजरहरु साइट भित्र प्रवेश गरेपनी फेसवुकमा जस्तो दोहोरियर वारम्वार जादैनन । नेपालमा फेसवुक भने वढी नै चलाइन्छ,१९ लाख भन्दा वढी ईन्टरनेट युजरले फेसवुक चलाउछन् तर ट्विटरको प्रयोग भने फेसवुकको तुलनामा खासै भएको छैन भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा केहि हजार मात्र ट्विटरको प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रयोगकर्ता उल्लेख्य नहुनमा यो आफैमा मनोरञ्जनात्मक कम र जानकारीमुलक वढी हुनु हो । भर्खरै एकाउण्ट क्रिएट गरेकाहरुले फेसवुकमा जस्तो लाइक कमेन्ट सेयर गर्ने अप्सन देख्दैनन् , कमेन्ट गर्ने अप्सनपनी भिन्नै देखिने हुदा फेसवुकमा लागेको वानी तुरुन्तै ट्विटरमा आएर परिवर्तन गर्न सकिरहेको पाईदैन । तर विश्वमा भइरहेका विविध गतिविधीहरु तत्कालै थाहा पाउने तथा जान्ने अवसरको लागी ट्विटर निकै उपयोगी छ । ट्विटरमा पहिल्य ट्विट गर्ने र पछिमात्र अन्य क्षेत्रमा त्यस्ता जानकारी राख्ने परम्पराको विकासले पनी यसको महत्व भिन्नै छ ।
ट्विटरमा फलो र अनफलो हुन्छ । यसमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गरिरहनु पदैन भने एपेप्ट गर्ने सम्मको लामो विधि पनी हुदैन । मन परेको जो कोहि व्यक्तिलाई फलो गर्न अर्थात साथी वनाउन सकिन्छ, उसले आफुलाई साथी वनाओस् या नवनाओस् ट्विटरमा यस्ता विषयले खासै फरक पादैन । ट्विटरमा साथी वनाउनै पर्छ अर्थात फलो गर्ने पर्छ भन्ने पनी हुदैन । अरुका गतिविधी जान्नको लागी फलो गर्ने हो । साथी वनाएको व्यक्तिका ट्विटरहरु मन पर्न छोड्ेको खण्डमा अनफलो गर्न पनी सकिन्छ । यसमा विशेषत मनोरञ्जन कम र जानकारी तथा ज्ञानवद्धक ट्वीटहरु वढी हुने प्रयोगकर्ताहरु वताउछन् । विश्वका चर्चित राजनितिज्ञ, समाजसेवी, साहित्कार, अभिनेता लगायतका व्यक्तिहरुले सवैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जाल फेसवुक भन्दापनी ट्विटरको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । उनिहरुले दैनिक रुपमा ट्विट गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिका ट्विट पढ्न तथा जान्नको लागी फलोअर्सले फलो गर्ने गर्दछन् । एउटा एनोन्युमस भनाइ नै छ, “लिंक्ङ इन तपाइले चिनेका मानिसको लागी हो, फेसवुक तपाइले चिन्ने मानिसको लागी हो भने ट्विटर तपाइले चिन्न चाहने मानिसको लागी हो ।”
यसवाट पनी के प्रश्ट हुन्छ भने आफुले जान्न चाहेको व्यक्तिको विविध गतिवीधीलाई नजिकवाट जान्ने अवसर ट्विटरले दिईरहेको हुन्छ । त्यसैकारणले आफुले अरुलाई र अरुले आफुलाई फलो गर्ने गरिन्छ । सम्वन्धीत क्षेत्रका जानकार,विद्धान तथा विशिष्ट व्यक्तिले ट्विटरमा लेखेका तथा पोष्ट गरेका विषयलाई आधार मान्दै विश्वका ठुला ठुला सञ्चार माध्यमले आफ्ना लागी समाचारको खुराक वनाइरहेका हुन्छन् । ट्विटर प्रयोगकर्ताहरु यसलाई अन्य सामाजिक सञ्जालको तुलनामा वढी सुरक्षित भएको अनुभुती गर्ने हुदा पनी यसलाई विश्वसनिय मान्दछन् ।
नेपालमा व्लग तथा वेवसाइट सञ्चालक तथा सञ्चार क्षेत्रसगँ सम्वन्धीत व्यक्तिहरुले ट्विटरको वढी प्रयोग गर्ने गरेको भएपनी पछिल्लो समय सर्वसाधारण समेत ट्विटर ट्रेन्डतर्फ गइरहेको पाइन्छ । उनिहरु भन्छन् निरन्तर ट्विटरको उपयोग गर्दै जादा धेरै महत्वपुर्ण व्यक्तिलाई फलो गरिन्छ भने उत्तिकै मात्रामा खोजिरहेको आवश्यक जानकारी पाईन्छ । ट्विटर यति महत्वपुर्ण हुदाहुदैपनी के तपाई फेसवुकमै मात्र पो हुनुहुन्छ कि ? आफुलाइ चाहिएको आवश्यक जानकारीको लागी ट्विटर ट्रेन्डमा आजै किन सहभागी नहुने ? ट्विटरमा म । ११ पुस २०६९ मा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित ।
Dinesh Dangi March 23, 2013 Log in to Reply
बर्तमान अबस्थामा भारत पर्भास मा लाखो नेपाली बेरोजगार को चपेट मा छन् !कुनै आइडी परुफ न प्रप्त हुने न ही रासनकार्ड क्सोगर्दा आफ्नो जहाँ परिवार लाइ साँझ बिहान को हात मुख भेट गर्न पनि अत्येंत दयनीय अबस्था रहेको छ ! उता नेपाल का नेताहरु का गरेका सन्धि सम्झोता कता छन् ति सन्धिहरु द्रित्ये प्क्क्ष हुन् वा एक पक्क्ष होलान ! प्रमुख त सन् १९५०को भारत नेपाल को कथित मैत्रीपूर्ण सन्धि नेपालीहरु को भविष्य का अभिन्न अंग साबित भएको जग्जहिर नै छ ! परन्तु हाम्रो नेपालका नेताहरु ले कहिले पनि भारत स्तिथ नेपालीहरु को पर्ती भावना देखियको छैन !दिनेस डाँगी भारत नेपाली समाज !
यही दिनांक 19-3-२०१३ को रोल्पा जिल्ला एरिवांग गाबिश झिन्ग्जा४ का श्री नरबहादुर बूढा वर्ष ५९ का श्रीमती उर्मिला बूढा वर्ष ५६ लापता भएको अखिल भारत नेपाली एकता मंच नेपाली समाज हिमाचल प्रदेश सोलन जिल्ला समिति मा २२-3-२०१३ को खोजतलास हेतू उजुरी पेस गर्नुभएको छ ! उक्त पर्क्रिया लाइ समाज ले अनेक समिति मा फोटो सहित पत्रचार को तिब्रता दिएको छ !कुनै जनसमुदाय लाइ निघामा आए तरुन्त उक्त मुबाई नम्बर मा खवर गर्न समाज आशावादी रहेको छनम्बर-९४१८१६९०१७ वा ८६७९६८७९९८,घर-०१७९२२३१०३६ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्द छ! धन्यवाद भवदीय आयोजक समिति इन्चार्ज दिनेश डाँगी!